Introduction I love kids. Chimwe zvikonzero ndinoda vana ndechekuti vanoratidza isu pachedu. Havachina kufanana zvishoma magirazi. Regai ndikuudzei zvandinoreva. Kids have pretty much all of the...
Nzira isu sei shoko inoenderana ndiani zviri kubva. Ndikupe muenzaniso. Kana mutorwa anofamba kwandiri mumugwagwa uye oti, “Let me borrow...
Air rwaJodhani vari iconic. Handina kudzipfeka zvikuru kukura zvazvo, nekuti vabereki vangu vakaramba ini kutenga ridiculously shangu zvinodhura. Handina kufara nazvo, but I knew I would never get...
This video and manuscript is from Trip’s General Session at the Legacy Conference 2013. Introduction The theme of this conference is Soli Deo Gloria, kana Mwari rukudzo oga. Ndizvo dingindira guru. And...
Hapana anoda zita droppers. Munoziva ani ndiri kutaura pamusoro. vanhu vaya vanoda kuziva kuti vazive vanhu kuti ungangodaro uchida kuziva. Pandinofunga "namedropper,” there’s one...
Ndakadzora kukwira pamwe Trayvon Martin the saga kubva pakutanga. Kufanana vazhinji venyu Ini akatarisa nhau, verenga nyaya, uye akataura nezvazvo neshamwari. It dominated public conversation...